Usoro na ọnọdụ nke Weekly Win agbam ume |
Usoro na ọnọdụ nke Weekly Win agbam ume
Nke a nkwalite bụ nanị dị na nti akaụntụ ịgụ agadi 18 ma ọ bụ karịa.
Nke a nkwalite ga-abụ 3rd, 10nke, 17nke, 24nke na 31st May 2016 (GMT).
Naanị Uru na Loss (P&L) ọrụ n'oge na nkwalite oge on oghere egwuregwu ga-agụpụtara kwupụta nzere maka agbam ume.
The agbam ume ga-ọdịda dị ka net uru (ezigbo ego winnings) on oghere egwuregwu.
Ke edinam na gị net P&L ka nweworo a nke kacha nta nke £ 10 na winnings, ị ga-enweta a agbam ume gbakọọ na 10% gị oké njọ Uru on niile oghere egwuregwu.
Iji ruo eruo maka Win agbam ume Akon, Player doro a kacha nta nkwụnye ego nke £ 10, n'ubọchi.
Oke ngụkọta ego ego bụ £ 50.
Standard wagering chọrọ nke 30x daashi ego itinye tupu bonus ma ọ bụ ihe ọ bụla kwekọrọ ekwekọ winnings nwere ike napụrụ. Winnings anya bonuses na-capped na 4x daashi ego.
Daashi nwa anụmanụ nwere ike na- 72 awa-otoro na akaụntụ gị.
General Usoro na ọnọdụ ide. Management mkpebi bụ ikpeazụ N'ọnọdụ nile.
Usoro na ọnọdụ nke Win agbam ume Thursday
Usoro na Ọnọdụ – 50% Win mbo mbuli elu £ 100
Usoro na ọnọdụ nke agbachitere Cup mgbachapụ Win agbam ume
Usoro na ọnọdụ nke 20% Win mbo mbuli All Week